emelitere ikpeazụ: Dec. 27 2017 | 3 min agụ
Nke a bụ a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị, na a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị nke Pita hụrụ, -adịghị ala. Ya mere, anyị pụrụ ịnọ gwa n'ihi na dị nnọọ a nkeji banyere nwaanyị nkịta? Na m na-ekwu “nwanyi nkịta” na ihe ndị kasị euphemistic uche, dị ka ọ na-akọ ghara canines, ma ha agbụrụ mmadụ counterpart na-enye ndị inyom na nkịta ha aha ọjọọ. Ma n'ihi na nke a bụ a SFW saịtị ma ná mgbalị iji kwụghachi ndị inyom na nkịta na ùgwù na ịhụnanya ha kwesịrị-, ka ikwu kama banyere Heartless Queen aṅụ (ma ọ bụ HQBs) na ndị ikom ha n'anya, na ihe e ịmụta ihe n'aka ha ka ha onwe anyị mmekọrịta mma.
Oge na oge ọzọ, Enwewo m mbụ aka àmà onu nke “mma Ihọd hụrụ HQB”. Ọ bụ n'ezie ihe dị ịtụnanya na-le-a n'anya, ụdị obi, courteous na-emesapụ aka onye o yiri ka mgbe niile na-ọnọdụ nke ekwe n'elu azu azu ya HQB; o yiri ka nwekwara n'anya na minit ọ bụla nke anabatakwa ya chọrọ na-agba ndị brunt nke ya aghara aghara nlelị. Ma ndị a mmekọrịta nwekwara ụfọdụ n'ime ndị kacha mma m na hụrụ na okwu nke Ekliziastis; na kwa, M ghọtara, na okwu nke n'ókè ụfọdụ nke mmekọrịta ịga nke ọma.
Ya mere, ihe nwere ike anyị, dị ka ezigbo, echiche inyom na-amụta site HQBs adọta na na-na ụdị mmadụ na o yiri ka ha enweghị nsogbu na-adọta ma na-eburu?
1) HQBs nwere ike n'echiche nke njirimara
HQBs ma ndị ha bụ na ihe ha chọrọ. Ha maara ihe ha na-na tebụl na ha bụ na-akpali n'ihi ihe ndị metụtara ha bụ ha onwe ha na ha nwere ike ịbụ pụrụ iche si ha bụ nwunye ọdịmma. Ọ na-agwụ ike ka na-akpa onwe gị, na HQBs cheworo a.
2) HQBs nwere iwu nke ụwa ha
Otu HQB yiri ka iwu nke ụwa gburugburu ya (ma ọ n'ezie ma ọ bụ na). Àgwà a na-enye a ụbụrụ agbam ume ya bụ nwunye ego-ma ọ bụrụ na o nwere ụfọdụ achịkwa na-eme ya obi ụtọ, na o nwere ịchịkwa “The World”, o nwere akara nke “The World” site zighachi akwụkwọ nnọchiteanya. Ọ bụ na dum “ma ọ bụrụ na A = B na B = C, mgbe ahụ A = C” ihe. Olee otú nke a ịsụgharị n'ime a bara uru n'ọnụ? ezigbo, echiche ndị dị ka mụ na na-abụghị nnọọ olu ike na ihe anyị mere na nkwurịta okwu. N'ịbụ olu ike dị ukwuu dị iche iche karịa ịbụ ike ike, nke bụ isi M.O. gị nkezi HQB na bụ ihe na-enye ya na ọrịa na-enwetatụbeghị, tenuous akara nke “The World”. Kama ebe ọzọ olu ike ga-ekwenyere a ukwuu iwu gị ụwa, -enweghị n'ụzọ ndị ọzọ na-adịghị mma pụta mbuso agha. Otu ihe atụ nke a bụ nanị ikwu ihe ị chọrọ na ihe mere ọ na-eme uche gị lee ya anya, sans na-eleda m anya, ndisụhọrede iwe ya mgbe n'ọrụ na-eme yiri arịrịọ site HQBs.
3) Mgbe-ewu ewu na pụtara, “Ndị ikom dị ka a Ịma Aka”!
Olee otú ọtụtụ ndị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị isiokwu na akwụkwọ nwere ị na-agụ na-lara ụfọdụ version nke echiche bụ isi na ndị mmadụ ga-achọ ka a na a ịma aka, n'ihi ya, ha na-eche mmezi pụrụ iche mgbe ha na-ike imeri kwuru ịma aka? Ma, onwe ha, ga-ekwu okwu nke ịnọ ná ọzọ juru nwaanyị ọzọ mara mma karịa onye bụ mgbe niile-nwere emeghe akwụkwọ. Mgbe ụfọdụ elusiveness egosipụta dị ka-Olee otú m ga-ekwu ịdị obere aka ntagide na-ekwupụta ụdị ọ bụla nke oma mmetụta uche ma ọ bụ nzaghachi (nke bụ ebe HQBs na-abịa). Ụfọdụ ndị ikom apụghị iguzogide ihe ịma aka nke na-agbalị rụrụ arụ ụdị ọ bụla nke obi ụtọ nzaghachi site na HQB na otú ọ na-aghọ ihe a na-akwa mmasị.
Olee otú unu (ọzọ, dị ka ezigbo, echiche nwaanyị na ị bụ) atụgharị onwe gị ịbụ ihe ịma aka? Nke a pụrụ ịbụ ihe disingenuous egwuregwu na-egwu na akwụkwọ dị ka “Iwu” (Fein na Schneider) niile, nke nwere ike na-arụ ọrụ maka onye ọ bụla na pụrụ ịhapụ gị ọrịa na-enwe mmetụta ná mgbagwoju anya banyere ihe na-ekwu na mgbe. Kama, ewu ndụ gị na-enwe ezigbo zuru na-akpali akpali-eme ka ị a ezi ịma aka ntu ala a ụbọchị na. Ọ bụghị naanị na ọ ga-elele anya na dum “ịbụ ihe ịma aka” ekwu na otú ahụ ungracefully e ji mara HQBs (na ndị ikom ahụ wee mara mma), ma gị ụbọchị ga na-eche na ọtụtụ ihe ndị ọzọ kpọrọ mgbe ị mere a mgbe na-eji gị n'ụzọ doro anya oge bara uru na ya.
4) Ọ dịghị egwuregwu
E-abịa oge mgbe mmadụ akwụsị anabatakwa guessing egwuregwu-ma nke a bụ site n'onye ahụ nke ha ịbụ a nta ọzọ tozuru okè, ma ọ bụ mmekọrịta dị onwe ya ebe toro n'ofè ya mbụ flirtation. Ikekwe nke a n'ọnụ nwere ike ọ dịghị ihe ọzọ na-ezughị ezu otoro na dum "Ekliziastis" anomaly n'ihu site HQB / Nice Guy mmekọrịta. HQBs-ekwu ihe ha chọrọ, na mgbe ha chọrọ ya. E nwere ole na ole egwuregwu na intangibles na-emeso ihe HQB, na ọtụtụ ndị ikom ahụ a ume ọhụrụ. Nke a agbatị na ọcha si a di na nwunye nke gara aga Atụmatụ-in ịbụ n'ụzọ kwụ ọtọ na gị nkwurịta okwu (I.E. ịbụ olu ike), na doro nnọọ anya na ihe ị chọrọ site na onye gị na ọ bụrụ na ọ na-adịghị ama na-enye ya, na ị na ọkọnọ a ịma aka na ọ ga-abụ na obi ụtọ n'itinyekwu izute n'ihi na ị na na na ya doo anya na ọ ga-atụ egwu ya na mgbalị ga-efu.
Ya mere, Ụdị Obi-na-obi, na ndị a Atụmatụ obi-ma eleghị anya, anyị nwere ike na-ekwu na a obere ibu òkè nke Nice Guy ahịa n'ihi na anyị onwe anyị!